घरमा पन्ध्र महिनादेखि अष्ट्रेलियामा छु भनेकी छोरीको काठमाडौंको सुन्धाराको होटेलमा ला’श फेला परेपछि… – Paluwa Khabar
घरमा पन्ध्र महिनादेखि अष्ट्रेलियामा छु भनेकी छोरीको काठमाडौंको सुन्धाराको होटेलमा ला’श फेला परेपछि…
भाद्र २६, २०७८ शनिबार 39
काठमाडौ । कुनै घटना यस्तो फिल्मी शैलीमा भइरहेका छन् की वि’श्वास नै गर्न सकिन्न । काठमाण्डौँमा केहि दिन अगाडी यस्तै घटना भएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा सुन्धारामा रहेको होटल प्रे’सिडे’न्टमा एक महिलाको ला’श फेला पर्यो । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
तर घटना निक्कै शं’कास्पद छ । विगत पन्ध्र महिनादेखि अस्ट्रेलियामा रहेको भनिएकी रजनी गुरुङको ला’श होटलमा भेटिएको हो ।होटलको को’ठामा रहेको शि’लि’ङ’मा उनी मृ’त अवस्थामा फेला परेकी हुन् । प्रहरीका अनुसार घ’टना निक्कै शं’कास्पद छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
रजनी गुरुङले विगत पन्ध्र महिनादेखि अस्ट्रेलियामा छु भनेर घर परिवारलाई जानकारी दिइरहेकी थिइन् । महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौका प्रवत्ता रमेश कुमार बस्नेतका अनुसार पोखरा घर भएकी उनी मृ’त अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले अनुशन्धान था’लेको छ ।
उनी मृ’त भन्ने थाहा पाएपछि प्रहरी पुग्यो । खा’न’त’ला’सी गर्दा उनी पोखराकी रजनी गुरुङ भन्ने पत्ता लाग्यो । त्यसपछि उनका परिवार झि’काईयो ।
अ’भिभावकको उपस्थितीमा परीक्षणका लागि प’ठाइएको बस्नेतको भनाई छ । मृ’तक गुरुङको मृ’त्यु कसरी भयो भन्ने बारेमा प’रीक्षण रि’पोर्टपछि मात्रै बताउन सकिने बस्नेतले बताएका छन् ।
तर रजनी गुरुङले घरपरिवारमा वि’गत पन्ध्र महिनादेखि अस्ट्रेलिया पु’गिसके भनेर बताएका कारण उनले किन ढाँ’टिन् ? पन्ध्र महिनादेखि उनले के गरेर कहाँ ब’सिन् । यो सबै पत्ता लगाउन प्रहरीले गहिरो अ’नुशन्धान गरिरहेको छ । फोटो फाइल ***यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस**
Posted in main-news
Prevजतिसुकै बिजी भएपनि फोटो छोएर सेयर गर्नुहोस्, आफुपनि येस्तो हुनबाट बच्नुहोस् !
Nextनपढ्नेलाई ठुलो दशा लाग्नेछ सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला , ॐ लेखि सेयर गरौं !
तपाईकाे टेलिभिजनमा बिदेशि च्यानल नआउनुकाे कारण
सरकारद्धारा ९ गतेबाट लकडाउनको घो’ षणा
मेरो ज्यान तलमाथि भयो भने अनौँठो नमान्नुहोला-प्रधानमन्त्री ओली
ओलीले खोसे योगेश भट्टराईको यतिठुलो महत्वपुर्ण पद , रूदै यस्तो भने योगेशले
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (397)
७.	रुपन्देहीमा बुवाआमाले आफ्नै ९ महिनाको शिशुको घाँटी रे टेर ह त्या गरे,घ टना हुनुको पछाडी छ यस्तो कहालीलाग्दो रहस्य (भिडियो हेर्नुस्) (33)
८.	केटा-केटाले धुमधामसंग गरे बिहे, सिन्दुर पोते नै लगाएर भित्राए (भिडियोसहित) (32)